राजीनामा पर्दैन, लड गगन थापा भिड - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
राजीनामा पर्दैन, लड गगन थापा भिड
सरला गौतम कार्तिक २९
क्षणभरमै गगनको नैतिकता नागरिकको परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्यो। उनले अंक कम ल्याएका हुन्। फेल भएका होइनन्। एकै सटमा पूर्णाङ्क ल्याउन सक्ने हाम्रो प्रणाली छैन।
६२–६३ को जनआन्दोलनमा कांग्रेसलाई सकस भएको थियो गणतन्त्रको नारा लगाउन।
गगन थापा कुर्लिए सडकमा, सजिलो पारिदिए। सडकमा प्रभाव जमाएका गगनले त्यसपछिका दिनमा संचारमाध्यममा पनि राम्रै प्रभाव कायम राखे। एक किसिमले उनी मिडियामा हट केक बनिरहे। चातुर्य, सामाजिक सम्बन्ध र अध्ययनशीलताका कारण पनि उनी चर्चाबाट विमुख हुन परेन।
राम्रा कुराले चर्चामा आइरहे तर उनको काम देख्न आतुर नेपाली बिस्तारै बिच्किन थालिसकेका थिए।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा विपक्षी पार्टीका मतदाताको मत समेत ल्याउन सफल भएर उनले आफूलाई फेरि ‘फर्म’ मा ल्याए।
तर घैंटे प्रकरणले गगनको लोकप्रियताको डिग्री ह्वात्तै घटायो।
निशस्त्र अवस्थामा रहेको अपराधीलाई सरकारले मार्नु हुन्न भन्ने उनको अडान बेठिक होइन। पुलिस अफिसरको पपुलर स्टन्टको उनले मानवअधिकारको अडानसहित विरोध गरे। पहिलोपटक नमज्जासँग अलोकप्रिय भए। राजनीतिक जोडघटाउबाट माथि उक्लेर जोखिम मोले र उदाउँदो राजनेताको स्वरुपमा माझिँदै गरेको आभास दिए।
देशमा पट्यारलाग्दो र निराश राजनीति चलिरहेको, लोकमानको दादागिरी बढिरहेको बेला उनी स्वास्थ्य मन्त्री भए।
जनमानसमा एक्कासी तरंग आयो। स्वभाविक हो उनीमाथि अपेक्षाको ओइरो पनि लाग्यो।
क्याम्पस अगाडि केही वर्षअघि नारा लगाइरहेको तन्नेरी देशको स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अब केही होला कि?! यति आशा जनताले गर्ने नै भए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेथिति बिरुद्ध डा. केसीको अनसनकैै पक्षधर थापाले मन्त्रालय सम्हाले। संयोग गजबको। एकपछि अर्को चाङ लागेका चुनौतीले उनलाई अफिसमा गिज्याएर पर्खिरहेकै थिए।
अस्पतालको निरीक्षणबाट सुरु भएको उनको प्रारम्भिक काम मृगौला रोगीको निशुल्क डायलेसिससम्म आइपुग्दा लोकप्रिय बन्यो।
पैसावाल राजनेताहरुले उपचार खर्च मागेर उनको निद हराम गरिरहेकै थिए। केन्द्रविन्दुमा आइपुगिन् सुजाता कोइराला।
हुनेखाने मान्छेले सरकारको टाउको नखाए पनि हुने। सुजातामा त्यो विवेकको के आश गर्नु। पन्ध्र लाख भन्दा बढी उपचार खर्च नदिने स्वास्थ्य मन्त्रीको अडानलाई गिज्याउँदै सरकारले पचास लाख दिने निर्णय गर्यो।
उपचार खर्च नपाएर आत्महत्या गरेका समाचारले मिडियाको हेडलाइन तातिरहेको समय छ।
विकट जिल्लामा एउटा डाक्टर नहुनु त हामीलाई दालभात समाचार लाग्छ।
पाठेघरको उपचार नपाएर माटोमा रगत चुहाउँदै, पसिना मिसाउँदै काम गर्ने महिलाले राज्यलाई पुर्याएको योगदान हिसाब बाहिरको कुरा छ।
यता एक धनाढ्य राजनेताको उपचारमा सिंगो राज्यको निर्णय केन्द्रित छ।
यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको लोकप्रियता सगरमाथाको चुचुरोमा बसिरहन सक्दैन।
काम गर्दै जाँदा जस र अपजस आउनेजाने कुरा हुन्। मुख्य कुरा आफ्नो अडान र नियत हो।
गगन थापा राजिनामा देउ! सुन्दा निकै प्रगतिशील लाग्ने यी वाक्यहरु दोहोर्याउन एउटा तप्का लागिपरको छ।
नैतिकता भनेको कहिल्यै जिम्मेवारी नलिने र ताली खाइरहने विरोधी भाषण गरिरहनु होइन। निहीत जिम्मेवारी पुरा गर्दै जाने र अपजस लिने पनि हो। अप्रिय हुने तर गर्नुपर्ने काम निरन्तर गरिरहनु हो। हामीलाई यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर सरकारमै बसेका मान्छेले भन्दै हिँड्ने भाषणको बानी लागेको छ।
यसो गर्दैछु, यति मात्रामा सफल भएँ, अरु कामका लागि यो यो योजना छन् भनेको सुन्ने बानी लागेको छैन। गगन थापाले राजीनामा दिएर फेरि सडकमा आएर भाषण गर्ने? मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने र ट्विट लेख्ने?
विरोध गर्न सजिलो हुन्छ। विरोधीहरुको माझ बसेर थोरै भएपनि सुधारको काम गर्न गाह्रो हुन्छ। गगन थापासँग उर्जा छ, खुबी छ। सजिलो काम गर्न राजीनामाको लागि हौस्याउनु आवश्यक छैन। प्रणालीभित्रै बसुन्। कहर सहुन्। काम गरुन्। पररर ताली बज्ने भाषणको लोकप्रियता मात्र होइन, कोशिस गर्दा फेल भइन्छ, अलोकप्रियताको निम पनि चाखुन्।
हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीभित्र देखिएका, नदेखिएका धमिराहरुको जगजगी छ। बिस्तारै रेशमी किराहरु पस्नु पर्छ। धमिराहरुको हुलसँग एकैपटकमा विजय हासिल गर्न सकिन्न। लडिरहनु, गगन थापा। थिति बसाल्ने कोशिसमा लागिरहनु। राजीनामावाला सस्तो लोकप्रियता बेकार छ।
प्रकाशित २९ कार्तिक २०७३, सोमबार | 2016-11-14 16:31:48